MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward Sone Sone Lin Lin Pack mm - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
စုံစုံလင်လင် Pack ဆိုတာဘာလဲ
MPTမှ တန်ဖိုးထားလေးစားရပါသော သုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက် ခံစားခွင့်အများကြီး ရယူနိုင်တဲ့ စုံစုံလင်လင်ပတ်ကေ့ချ် တွင် “Unlimited Instagram” ကို ထပ်ပေါင်းထည့်ပြီး ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။
စုံစုံလင်လင် ပက်ကေ့ချ် ဝယ်ယူရုံနဲ့ စိတ်ကြိုက်သုံးနိုင်တဲ့ Facebook, Mobile Legends, Viber, Instagram, JOOX ဒေတာတွေအပြင် အခြားအင်တာနက်အသုံးပြုမှုအားလုံးအတွက်ဒေတာ 2GB၊ MPT ဖုန်းအချင်းချင်း သင့်တော်သော နှုန်းထား 10Ks/min ဖြင့် ခေါ်ဆိုခွင့်နှင့်အတူ၊ ဖုန်းဘေလ် ၁၀၀၀ကျပ်ပါ ရရှိပြီး ရက်ပေါင်း (၃၀) အသုံးပြုနိုင်တဲ့ စွယ်စုံရပက်ကေ့ချ်ပါ။
စုံစုံလင်လင်ပတ်ကေ့ချ်ကို MPT4U ၊ USSD Code *4998# နှင့် အခြားသော မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာနည်းလမ်းများဖြင့် ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
စုံစုံလင်လင်ပတ်ကေ့ချ်မှာ ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိနိုင်ပါသလဲ
ပရိုမိုးရှင်းကာလ (၂၈)ရက် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ မှ ထပ်မံမကြေညာမီအချိန်အထိ
၂။ Postpaid, CDMA, Base Tariff နှင့် လက်ရှိအသုံးပြုခြင်းမရှိသူများ ဝယ်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၃။ သုံးစွဲသူများသည် ကြိုက်နှစ်သက်ရာနည်းလမ်းမှတစ်ဆင့် ဝယ်ယူအသုံးနိုင်ပါသည်။
၄။ အကန့်အသတ်မရှိ Facebook Data အတွက် Facebook App/ Browser မှ Facebook (ပြင်ပ links များမပါဝင်) နှင့် Messenger (Voice, Video calls များမပါဝင်) ကို အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၅။ Messenger မှ Voice call, video call များနှင့် Facebook မှတစ်ဆင့် click နှိပ်ပြီးပြင်ပ Websiteများ၊ link များကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်းများကို ၀ယ်ယူထားသော Data Pack (သို့မဟုတ်) Pay-As-You-Go နှုန်းထားဖြင့် ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၆။ Viber အသုံးပြုခွင့် (Voice, Video calls များမပါဝင်) ကို အကန့်အသတ်မရှိ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Voice, Video calls များ အသုံးပြုခြင်းများကို ၀ယ်ယူထားသော Data Pack (သို့မဟုတ်) Pay-As-You-Go Rate ဖြင့် ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၇။ အကန့်အသတ်မရှိ MLBB Data အသုံးပြုခွင့်သည် အဆိုပါ ဂိမ်းကစားရန်အတွက်သာဖြစ်ပြီ: ဂိမ်းအတွင်း Streaming ပြုလုပ်/ ကြည့်ရှုခြင်း၊ ဂိမ်းအတွင်းဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းနှင့် ဂိမ်းကစားခြင်း အတွက်မဟုတ်သည့် အခြားအသုံးပြုမှုများအတွက် ၀ယ်ယူထားသော Data Pack (သို့မဟုတ်) Pay-As-You-Go နှုန်းထားဖြင့် ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်သည်။
၈။ Data Bonus (2GB) ကို အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအားလုံးအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါမည်။
၉။ MPT ဖုန်းအချင်းချင်းကို ၁ မိနစ်လျှင် ၁၀ ကျပ်နှုန်း (အခွန်မပါ) ဖြင့် ခေါ်ဆိုနိုင်ပါမည်။
၁၀။ အကြိမ်အရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ခံစားခွင့်များကို နောက်ဆုံးသက်တမ်းအထိ သက်တမ်းတိုး ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ၂၀၂၀ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၈) ရက်နေ့ မတိုင်ခင် နှင့် ၂၀၂၀ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၈)ရက်နေ့ နှင့် ယင်းနေ့ နောက်ပိုင်း ဝယ်ယူထားသော ပက်ကေ့ချ်များ၏ ခံစားခွင့်များသည် သက်တမ်းတိုး ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၁၁။ MPTကြောင့်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် MPT၏ကွန်ရက်များတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည် ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အခြားသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကြောင့်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အခြားကွန်ရက် တစ်ခုခုတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်၊ စနစ် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု တစ်စုံတစ်ရာတွင် ချို့ယွင်းမှု၊ အနှောင့်အယှက်ရှိမှု၊ အလျဉ်ပြတ်စေမှု သို့မဟုတ် ပြည့်ကျပ်မှု စသည့် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုခု ဖြစ်ပေါ်ခြင်း တွေ့ရှိိပါက ဝယ်ယူသုံးစွဲသူအား စာနှင့်ရေးထားသည့် နို့တစ်စာ ပေ:ပို့ခြင်းမပြုဘဲ၊ MPT သည် ဝန်ဆောင်မှု တစ်စုံတစ်ရာ ကိုဖြစ်စေ၊ အားလုံးကိုဖြစ်စေ အချိန်မရွေး ဆိုင်းငံ့နိုင် သို့မဟုတ် ရပ်စဲနိုင် သည်။ အသေးစိတ်သိရှိရန် https://www.mpt.com.mm/mm/about-home/terms-conditions-mm/
၁၂။ ပရိုမိုးရှင်းကာလသည် ၂၀၂၀ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၈) ရက်နေ့ (မနက် ၄နာရီ) မှ ထပ်မံမကြေညာခင်အချိန်အထိ အကျုံးဝင်ပါသည်။
အကြိမ်အရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ခံစားခွင့်များကို နောက်ဆုံးသက်တမ်းအထိ သက်တမ်းတိုး ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သို့ရာတွင် ၂၀၂၀ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၈)ရက်နေ့ မတိုင်ခင် နှင့် ထိုနေ့ရက်မှ ၂၀၂၀ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၈)ရက်နေ့ နှင့် ယင်းနေ့ နောက်ပိုင်း ဝယ်ယူထားသော ပက်ကေ့ချ်များ၏ ခံစားခွင့်များနှင့် သက်တမ်းများ ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၁။ စုံစုံလင်လင်ပက်ကေ့ချ် ဆိုတာ ဘာလဲ?
စုံစုံလင်လင်ပက်ကေ့ချ် ဝယ်ယူရုံနဲ့ စိတ်ကြိုက်သုံးနိုင်တဲ့ Facebook, Mobile Legends, Viber, Instagram, JOOX ဒေတာတွေအပြင် အခြားအင်တာနက်အသုံးပြုမှုအားလုံးအတွက်ဒေတာ 2GB၊ MPT ဖုန်းအချင်းချင်း အသက်သာဆုံးနှုန်းထားဖြင့် ခေါ်ဆိုခွင့်၊ ဖုန်းဘေလ် ၁၀၀၀ ကျပ်ပါ ရရှိပြီး ရက်ပေါင်း (၃၀) အသုံးပြုနိုင်တဲ့ စွယ်စုံရပက်ကေ့ချ်ပါ။
၂။ ပက်ကေ့ချ်စျေးနှုန်းက ဘယ်လောက်လဲ?
ပုံမှန်ခံစားခွင့်တွေအတွက်ကျသင့်မယ့်တန်ဖိုး ၉၉၉၆ ကျပ်အစား ထက်ဝက်တန်ဖိုး (၅၀% လျော့စျေး) ၄၉၉၈ ကျပ်ဖြင့် ခံစားခွင့်များအားလုံးကို ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာပါ။
၃။ ပက်ကေ့ချ်ဈေးနှုန်းမှာ အခွန်ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါသလား?
ပက်ကေ့ချ်ဈေးနှုန်းမှာ အခွန် ၅% ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
၄။ ဘယ်သူတွေ ဝယ်ယူနိုင်မှာလဲ?
MPT မှ ဆွေသဟာ/ရှယ်ပြော/ရွှေစကား အစီအစဉ် ရယူထားသော GSM/WCDMA prepaid စနစ် လက်ရှိ အသုံးပြုနေသူများ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Postpaid, CDMA, Base Tariff နှင့် လက်ရှိအသုံးပြုခြင်းမရှိသူများ ဝယ်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၅။ Facebook Data က အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့လား? Videos တွေကြည့်လို့ရမှာလား?
၆။ Viber Data ကို ဘာတွေသုံးလို့ရမှာလဲ?
Viber Data ကို Voice, Video call များမှလွဲ၍ အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ စိတ်ကြိုက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Voice, Video calls များ အသုံးပြုခြင်းများကို ၀ယ်ယူထားသော Data Pack (သို့မဟုတ်) Pay-As-You-Go Rate ဖြင့် ကောက်ခံသွားမှာပါ။
၇။ အကန့်အသတ်မရှိ Mobile Legends ဒေတာကိုသုံးဖို့ သတ်မှတ်ထားသော ဒေတာကန့်သတ်ချက်ရှိပါသလား?
မရှိပါ။ အကန့်အသတ်မရှိ Mobile Legends ဒေတာကို ဂိမ်းကစားရန်အတွက် အပူပင်ကင်းစွာ အကန့်အသတ်မရှိအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ သို့သော် ဂိမ်းအတွင်း Streaming ပြုလုပ်/ ကြည့်ရှုခြင်း၊ ဂိမ်းအတွင်းဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းနှင့် ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်မဟုတ်သည့် အခြားအသုံးပြုမှုများအတွက် ၀ယ်ယူထားသော Data Pack (သို့မဟုတ်) Pay-As-You-Go နှုန်းထားဖြင့် ကောက်ခံသွားမှာပါ။
၈။ ဒီဇင်ဘာလ (၂၈)ရက်နေ့မတိုင်ခင် စုံစုံလင်လင် Pack ဝယ်ယူထားသူများပါ အကန့်အသတ်မရှိ Instagram စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုခွင့်ရရှိမှာပါလား?
မရပါ။ အကန့်အသတ်မရှိ Instagram စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုခွင့်ကို ဒီဇင်ဘာလ (၂၈)ရက်နေ့မှစ၍ စုံစုံလင်လင် Pack ဝယ်ယူထားသူများသာ ရရှိအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
၉။ On-net mins pack တစ်ခုဝယ်ထားပြီး စုံစုံလင်လင် Pack ကိုလည်းဝယ်ထားပါတယ်။ MPTဖုန်းအချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုပါက မည်သည့် pack မှကျသင့်မှာပါလဲ?
On-net mins pack နှင့် စုံစုံလင်လင် Pack နှစ်ခုစလုံးဝယ်ယူထားပြီး MPTဖုန်းအချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုပါက On-net mins pack မှ အရင် ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၀။ ဖုန်းဘေလ်လက်ကျန် ၂၀၀၀ကျပ်နဲ့ စုံစုံလင်လင် pack မှ ဖုန်းဘေလ် ၁၀၀၀ကျပ်ရှိနေပါတယ် (စုစုပေါင်းဖုန်းဘေလ် ၃၀၀၀ကျပ်)။ MPTဖုန်းအချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုပါက ဖုန်းဘေလ်လက်ကျန်ထဲက ကျသင့်မှာပါလား?
ဟုတ်ကဲ့။ On-net mins pack ဝယ်ယူထားခြင်းမရှိလျှင် MPTဖုန်းအချင်းချင်းခေါ်ဆိုပါက ဖုန်းဘေလ်လက်ကျန်မှ ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၁။ လက်ကျန်ပမာဏကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်မှာလဲ?
၁၂။ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် စုံစုံလင်လင် Pack (MPT ဖုန်းအချင်းချင်း ၁ မိနစ် ၅ ကျပ်နှုန်းဖြင့် ခေါ်ဆိုခွင့်ဖြင့်) ကိုဝယ်ထားပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်မှာ ထပ်မံဝယ်ယူလျှင် MPT ဖုန်းအချင်းချင်းခေါ်ဆိုပါက ဘယ်နှုန်းထားနဲ့ ကျသင့်မှာပါလဲ။
ယခင်စုံစုံလင်လင် pack (ဒီဇင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့တွင်ဝယ်ယူထားသော) သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်အထိ MPT ဖုန်းအချင်းချင်းကို ၁ မိနစ် လျှင် (၅) ကျပ်နှုန်း (အခွန်မပါ) ဖြင့် ခေါ်ဆိုနိုင်မှာပါ။ ထို့နောက်တွင် ၁ မိနစ် လျှင် (၁၀) ကျပ်နှုန်း (အခွန်မပါ) ဖြင့် ကောက်ခံမှာပါ။
၁၃။ ဝယ်ယူတဲ့ အကြိမ်အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားပါသလား?
အကြိမ်အရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ခံစားခွင့်များကို နောက်ဆုံးသက်တမ်းအထိ သက်တမ်းတိုး ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သို့ရာတွင် ၂၀၂၀ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၈)ရက်နေ့ မတိုင်ခင် နှင့် ၂၀၂၀ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၈)ရက်နေ့ နှင့် ယင်းနေ့ နောက်ပိုင်း ဝယ်ယူထားသော ပက်ကေ့ချ်များ၏ ခံစားခွင့်များသည် သက်တမ်းတိုး ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၁၄။ တခြားသူများသို့ လက်ဆောင်ပေးလို့ ရပါသလား?
ရပါတယ်။ တခြားသူများသို့ လက်ဆောင်ပေးလိုပါက MPT4U app (သို့) *4998# မှတစ်ဆင့် အမှတ်စဉ် “2. Gift/ 2. လက်ဆောင်ပေးမည်” ကို ရွေးချယ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးမည့် ဖုန်းနံပါတ် ကိုရိုက်နှိပ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ပရိုမိုးရှင်းကာလမှာ ၂၀၂၀ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၈) ရက်နေ့မှ ထပ်မံမကြေညာခင်အချိန်အထိ ဖြစ်ပါတယ်။